Ogaden News Agency (ONA) – Iska-Hor Imaad KHasaare Gaystay oo Addis Ababa Ka Dhacay.
Iska-Hor Imaad KHasaare Gaystay oo Addis Ababa Ka Dhacay.
Posted by ONA Admin	/ September 13, 2018
Ilo-wareedyo lasoo xidhiidhay Wakaalada Wararka Ogadenya ee ONA ayaa noo xaqiijiyay in iska hor imaad culus oo khasaare balaadhan gaystay uu ka socdo magaalada Addis Ababa.
Warkan ayaa sheegaya in uu magaalada ka dhex jiray guux iyo is abaabul balaadhan oo salka ku haya isir nacayb iyo cadaawad gaamurtay oo u dhaxaysa qawmiyadaha ku muransan lahaanshaha magaalada oo in mudo ahba soo jiitamayay.
Xogta ay ONA heshay waxay intaas ku daraysaa in ay is hardiyeen shacab Oromo ah oo dhinac ah iyo dhamaan shucuubta kale ee ku dhaqan magaalada Addis Ababa oo dhinac ah sida sida Axmaarada, Guraagada, Tigrey ga, Shucuubta Koonfureed, Gambella.
Isku dhacan oo aan wali si dhab ah loo haynin khasaaraha ka dhashay ayaa waxaa la xaqiijiyay in uu jiro khasaare naf iyo maalba leh oo ka dhacay magaalada. Hadaba hoos ka daawo muuqaalo hordhac ah oo ONA ay heshay.